I-PA006 - I-OMG Emergency Personal Shrill Alarm Safety Alarm Keychain Yabesifazane, Izingane, Asebekhulile, Isitshudeni, Isisebenzi Sasebusuku - Izixazululo ze-OMG
I-PA006 - I-OMG Emergency Personal Shrill Alarm Safety Alarm Keychain Yabesifazane, Izingane, Asebekhulile, Isitshudeni, Umsebenzi Wasebusuku
NGOKWENZEKA KWEZIMOTO: Cindezela inkinobho ebomvu ukuthi ukukhanya kuvuliwe, kuzocishwa uma ukhulula, ukugcina uvikelekile endaweni emnyama uma uwedwa.
UMSINDO OTHANDAYO: I-120dB ukubhoboza indlebe nge-panic alamu ne-3 * AG13 amabhethri athandelwa ngaphambilini.
UKUSEBENZA KWEZEMPILO: Vele udwebe iphinikhodi noma cindezela inkinobho yocingo efihlekile kuze kufike emaminithini we-40 okuzwakalayo umsindo we-alamu.
SISEBENZISA: Kunconywa abesifazane, abafundi, izingane, ukugijima, abasebenzi asebekhulile nabasebenzi basebusuku, okuhle kubo bonke ubudala; Futhi kuyadingeka ukuhamba, ukuhamba ngezinyawo, ukumisa amatende nokuhamba inja.
Yize iningi lethu lingathandi ukucabanga ngamathuba okuba sesimweni esiyingozi, iqiniso liwukuthi, kungenzeka! SONKE singaba izisulu ezingaba khona!
Kulo mzuzu, i-alamu encane kodwa enamandla ne-LED Flashlight ingasinika ukuthula kwengqondo nokuzivikela ukuzivikela.
- Mane udonse iphini noma ucindezele inkinobho yokucasha efihliwe ukuze wenze i-alamu isebenze.
- I-alamu inhlabamkhosi ingazwakala ize ifike ku-600 ′ (185M) kude.
- Faka iphini emuva ukumisa umsindo futhi ingaphinda isetshenziswe futhi.
- Iphini ngeke liphume kalula.
- Umsindo we-alamu unomsindo ngokwanele ukudonsela ukunakwa kosizo, okunzima ukuwuziba.
- Isibani esimhlophe se-LED esimhlophe, esifanele ukukhanyisa indlela yokuhamba emnyama noma ukuthola umgodi wokhiye.
Isikhalazo esikhulu sabathengi
- Inketho yokuzivikela yanoma iyiphi iminyaka. Ilungele abafundi, izingane, abadala, abagijimayo, izikhova zasebusuku, abasebenzi abodwa, izikhova zasebusuku, abesifazane, amantombazane, abantu bodwa, ukuphepha kwamakolishi, amaphoyisa kanye nezikhulu zokuhlunyeleliswa kwezimilo
- Uketanga lokhiye lunamathela esikhwameni samantombazane, esikhwameni sesikole, kubhakeni, kulayini bamabhande, emapotimendeni, okhiye, enqoleni yezinja njll ukuze kube lula, ukufinyelela okusheshayo kanye nenani elikhulu ngamabhethri afakiwe.
- Kwenze uphephe lapho ukanisa, ugijima, ugijima, ugibela, ujabulisa, uhamba, njll.
Isikhathi sokuzwakala kwe-alamu siphelile mayelana nama-40 -60 amaminithi, uma umsindo we-alamu uba mncane noma kungekho umsindo, udinga ukuhlola ibhethri njalo futhi ubeke esikhundleni uma kunesidingo.
Sicela ugcine kude ezindlebeni zakho, uma usebenze i-alamu.
3.4 x 2.5 x amasentimitha angu-1.7
Ukubuka okuphelele kwe-3399 Ukubuka kwe-1 Namuhla